थाहानगरको चित्लाङमा मकवानपुर जिल्ला स्तरीय भलिवल प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ । चित्लाङस्थित स्वच्छन्दभैरव युवा क्लबले स्थापनाको रजत वर्षगाँठको अवसरमा जिल्ला स्तरीय भलिवल प्रतियोगिताको आयोजना गर्न लागेको हो ।
यही २६ पुसबाट शुरु हुने प्रतियोगितामा सहभागिताको लागि क्लबहरुलाई पत्राचार गरिसकिएको आयोजक संस्थाका अध्यक्ष पुण्यमान बलामीले थाहाटाइम्सलाई जानकारी दिए ।
प्रतियोगितामा प्रथम हुने टिमलाई रु. ५१,०००, द्वितीय हुने टिमलाई रु. २५,००० र तृतीय हुने टिमलाई रु. १५,००० नगदसहित शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र दिइने आयोजकले जनाएको छ । आयोजकका अनुसार २५ पुससम्मका लागि टिम दर्ताको समय राखिएको छ ।
प्रतियोगिता स्वच्छन्दभैरव युवा क्लबको खेल मैदान, माझगाउँ हात्तीसार, चित्लाङमा हुनेछ।